China China ambongadiny ambongadiny Super 2.0 Channel Home Theater BT5.0 3D Hifi Bass Sound TV Soundbar (SP-614) fanamboarana sy orinasa | Eyin
Orinasa marin-tànana ambongadiny Super 2.0 Channel Home Theatre BT5.0 3D Hifi Bass Sound TV Soundbar (SP-614)
Famatsiana herinaratra: DC, 18V / 2A
Vakitera mpamily: 2.25 ″ x4
Haben'ny vokatra: W860 × D70 × H70MM
Function: Bluetooth / ARC / Optical / AUX / RCA / USB
Vakitera mpamily: 2.25 ″ x4 + 5.5 Power Herin'ny famoahana: 80W
Haben'ny feo: W860x70x70MM
• FIAINANA TEATERA HERITRENANA & MAHALALALALANA - Miaraka amin'ny haavo 34 santimetatra ny halavany, ambanin'ny 2,5 santimetatra haavo, matte mainty vita vita, ny fantsom-peo fahitalavitra dia manome ny traikefa an-tsarimihetsika an-trano tsara tarehy. Mpamily enina midadasika 6 santimetatra, tweeter 1-inch, ary teknolojia Power Bass manokana no mandray anjara amin'ny fika ambany ambany sy ny feo mazava 110dB. Izy io koa dia namboarina tamin'ny seranan-tsambo refy bass symmetrika lafiny roa, miaraka amin'ny bas lalina kokoa sy ny heriny bebe kokoa. Henoy ny feo, tsapao ny tsy fitovizany!
• BLUETOOTH 5.0 & DSP NY TRANSMISIONA MAHAY INDRINDRA - Ny bara fanamafisam-peo farany ataonay dia mampiasa ny haitao Bluetooth 5.0 & DSP hiantohana ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha, ary ny fifandraisana azo antoka hatramin'ny 50 ft miaraka amin'ny fanjifana ambany. Miaraka amin'ny endri-javatra Bluetooth 5.0 vaovao indrindra, afaka milalao ny mozika tianao ianao na aiza na aiza. Mba hahatonga azy io ho mora kokoa kokoa, dia nanampy bokotra Bluetooth izahay teo amin'ny vatan'ny bara fanamafisam-peo izay ahafahanao mampifanaraka mora foana ny fitaovanao.
• FANAMPIM-PANAZAVANA FIVORIANA AMIN'NY MODE SOUND LAINGA - Mozika, Sarimihetsika, fanovana maody mahazatra amin'ny alàlan'ny fampiasana ilay remote tafiditra. Amin'ny maody Movie, avadiho ny sarimihetsika mahazatra ho lasa traikefa an-trano tsy manam-paharoa. Manampia fahazavana fanampiny ary milamina amin'ny lisitry ny lisitry ny mozika. Amin'ny maody mahazatra, ny injeniera Eyin hanasongadinana ny feon'ny olona mba hahafahanao manaraka ny tantara hatrany. Ny habetsahana sy ny herinaratra fanampiny dia hita eo akaikin'ny bara fitenenana.
• FANAMARIHANA INPUT INDRINDRA SY NY FAMONJENA MORA - Ny feo 2.0 fantsom-peo dia manohana safidy maro tariby toy ny HDMI ARC, Optical, fidirana AUX, ary USB mifanaraka amin'ny TV, projecteur, solosaina, mpilalao Blu-ray, tablette, XBOX, PS4, Amplifier, ary Bebe kokoa. Hamarino tsara fotsiny ny fantsom-peo TV amin'ny PCM ho an'ny maody optika alohan'ny hampiasana azy. Ankehitriny, tariby Optical 5 ft premium sy tariby RCA 5 ft no tafiditra ao anaty fonosana.
• WALL MOUNTABLE & NY INVESTMENT anao dia azo antoka tanteraka - Ny endriny somary manify an'ny bara fanamafisam-peo dia mifanaraka tsara amin'ny fahitalavitra misy habe na azo apetraka mora foana amin'ny rindrina miaraka amin'ny fonosana miharo. WARRANTY FANAMPIANA NY FIAINANA. Ny bara feo Eyin rehetra dia handalo fizahana fitsapana kalitao henjana alohan'ny handefasana azy.
Previous: 2021 Bara fanamafisam-peo vaovao miaraka amina Subwoofer namboarina, Bluetooth, ary Alexa Voice Control Built-In (SP-620E (S100))
2020 Fivarotana fahitalavitra mafana amin'ny TV mivarotra amin'ny Wireless Subw ...
Sina mpamatsy kitapo fanamafisam-peo vita amin'ny hazo ...
Tendrombohitra Tv And Soundbar, Wifi Soundbar ho an'ny Tv, Karaoke Soundbar, Ireo mpandahateny Soundtro Wifi, Alexa Soundbar, Tv Soundbars,